Nin soomaalida Iswiidhan oo xaaskiisa faas ku dhaaawacay oo la soo qabtay | Somaliska
Magaaladda Fiyeena ee dalka Ostari, waxaa gacanta lugu soo dhigay nin lugu sheegay inuu yahay Soomaali oo ka baxsaday dalkaan Iswiwidhan ka dib markii uu xaaskiiski dhaawac xoogan oo u adeegsaday faas kaga dhiftay madaxa. Ninkan oo magaciisa lugu sheegay Khadar Cabdi ayaa 38 jir, waxaana uu ka mid yahay dadka ugu qatara badan ee dalkaan baadi goobka loogu jiro.
Sanadkii hore ayuu ninkan iyo xaaskiisa waxaa ay daganaayeen degmadda Alvesta ee dalkaan Iswiidha, waxaa xilligaasi dhexmaray is qab qabsi keenay inuu xilli saq dhexe ah faas madaxa kaga dhifto. Wixii ka dambeeyey waxaa uu ka baxsaday dalka Iswiidhan oo iska dhiibay wadanka Ostari, halkaas oo magac been abuur ah ku joogay kuna guursaday xaas kale.
Booliska Iswiidhan oo in muddo ah ku raad joogay ayaa u gudbiyey booliska caalamiga ah ee Interpol sawiradiisa, muddo ka dibna waxaa laga soo qabtay guri yaala magaaladda caasimadda ah ee Fiyeena halkaas oo la sheegay in uu ku dhuumaaleeysanayey. Khadar ayaa dalka Iswiidhan yimid sanadkii 2013-kii, waxaana uu xaaskiisa la deganaa tan iyo markii dambeeysay ee ay diririrtu dhexmartay oo isku dayey inuu dillo.
somaliska idinkoo mahadsan waxaan idinka codsaneeynaa inaad noo faah faahisiin miisaaniyad sanadkaan la soo bandhigay wixi hirgalay mhadsanidiin